Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → octobre → 24 → Tapatapany
Redaction Midi Madagasikara 24 octobre 2014
# -Fenoarivo. Vehivavy nipoahan’ny jiro solitany. Vehivavy iray bevohoka fito volana no fantatra fa maratra mafy nipoahan’ny jiro solitany teny Fenoarivo tamin’ny alarobia hariva. Ny loharanom-baovao no nahafantarana fa tamin’ny fotoana nampidinany solika tao amin’ilay fanaovan-jiro no niseho ny loza. May tanteraka hatreny amin’ny lohany ka hatrany amin’ny faritra ambany. Efa tsaboina eny amin’ny hopitaly izy amin’izao fotoana izao.
# – Analamahitsy. Trano iray kilan’ny afo. Ny marainan’ny alakamisy tany amin’ny 3 ora tany ho any, tonga teny Analamahitsy ny mpamonjy voina. Trano iray no fantatra fa nirehitra talohan’io fotoana io tsy lavitra ny fivarotana lasantsy iray eny an-toerana. Efa nikotaba ny manodidina ary nifanome tànana namono afo. Voalazan’ny vaovao fa be dia be ny fahamaizana ary maro ny zavatra potiky ny afo. Tsy nisy kosa anefa ny aina nafoy.
# -Ankorondrano. Vaky trano saika isan’alina. Manomboka mihorohoro indray amin’izao fotoana izao ny mponina eny amin’ny faritra Ankorondrano Andrefana amin’ny afitsoky ny mpamaky trano sy mpandroba amin’ny alina. Ireo tafaresaka tamin’ny mpanao gazety dia sahy milaza fa efa mpamerin-keloka avokoa ireo manao izany asa fandrobana izany. Miandahy miambavy izy ireo. Eo amin’ny 1 ora maraina eo no fotoana fangalaran’izy ireo. Porofon’izany ny sifile manakoako eran’ny tanàna.